चिकित्सामा कलाको प्रयोग | Ayurveda Khabar
चिकित्सामा कलाको प्रयोग
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ- नाचेर, गाएर, चित्र कोरेर वा नाटकीय अभिनय गरेर पनि चिकित्सा हुन्छ। तर अचम्म मान्नु पर्दैन। यस खालको चिकित्सा विधिलाई कला चिकित्सा भनिन्छ।
अहिले विविध उपकरणको प्रयोगबाट मात्र चिकित्सा हुन्छ भन्ने सोचाइलाई नै मूलधार बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। तर कसैले पनि आफूभित्र रहेका विविध तरिका प्रयोग गरी उपचार गर्ने विधिहरुलाई महत्व दिएका छैनन्। यस्तै एक चिकित्सा विधि कला चिकित्साको बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छ।
नृत्य, गीत, संगीत, नाटक, लेखन, कलाकारिता आदि सम्पूर्ण कलालाई प्रयोग गरी बिरामीलाई आफ्नो समस्या व्यक्त गर्ने, भावना प्रस्तुत गर्ने चिकित्सा विधि नै कला चिकित्सा हो।
विश्वमा निकै चर्चित बन्दै गएको यस चिकित्सा विधिलाई अंग्रेजी भाषामा एक्सप्रेसिव आर्ट थेरापी भनिन्छ। यसको बारेमा नेपालमा कमै चर्चा र कार्य भएको पाइन्छ। आर्ट अथवा कलालाई कसरी रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने? के यो प्रभावकारी होला त? भन्ने प्रश्न छँदैछ।
यस थेरापीको बारेमा धेरै खोज नभए पनि प्रयोग चाहिँ पहिलेदेखि नै हुँदै¬ आएको तथ्य नकार्न मिल्दैन।
संगीतकार, कवि, रचनाकार, चित्रकारहरुले आफ्नो पीडा गीत, संगीत, चित्र, कविता, नाटक आदिमार्फत व्यक्त गर्दै आएका पनि छन्। महाकविको पागल कविता, लियोनाद्रो दा भिन्चीको मोनालिसा को चित्र, नारायाण गोपालका कर्णप्रिय गीतहरु पनि एक्स्प्रेस्सिव आर्ट थेरापीसँग सम्बन्धित छन्।
यस बाहेक आत्मकथा, जीवनी आदि पनि थेरापीकै भिन्न स्वरुप हुन्। जगदीश घिमिरेको आत्मवृत्तान्त पढेर म भावुक भएको छु। उनले आफू रोगको सिकार भएपछि अस्पतालको बेडमा बसेर लेखेको त्यो आत्मवृत्तान्त मदन पुरस्कार विजेता समेत भयो। उनी लेख्छन्, ‘मनको बह सबैलाई नकह होइन, यसको उल्टो मनको बह सबैलाई कह’ चरितार्थ हुन्छ।
यसको सुरुवात २०औं सताब्दीमा फ्रायड र जंगले केही बिरामीमा यसको प्रयोग गरेका थिए। जसमा बिरामीलाई चित्र बनाउन लगाएर आफ्नो भावना व्यक्त गर्न लगाइयो। तर यसको चिकित्सकीय प्रयोग भने जो वाल्देन आर्ट टिचरले आफ्ना विद्यार्थीमा गरिन्। १९६९ मा अमेरिकन आर्ट थेरापी एसोसिएसनको सुरुवात भयो। आर्ट टिचर एदिथ क्रमेरले १९७१ मा भने- चित्रकला आफैंमा एक उपचार हो।
हेर्दा सामान्य लाग्ने यस किसिमका कलात्मक कार्यहरु आजकाल पश्चिमा देशहरुमा विभिन्न रोगको चिकित्सा गर्नको लागि समेत प्रयोगमा छन्। जुन अवस्थामा हामी बोलेर व्यक्त गर्न असमर्थ हुन्छौं, त्यस्तो अवस्थामा पनि यो प्रभावकारी छ। यो चिकित्साले आफ्नो क्षमता वृद्धि गराउनुको साथसाथै रोगको पीडाबाट मुक्ति हुने बाटो देखाउँछ।
यो चिकित्सामा आफ्नो रोगलाई आफैंले जित्नको लागि आफूभित्रको कला प्रयोग गरिन्छ। भनिन्छ, जीवनमा केही पाउन केही गुमाउनुपर्छ। तर यसमा केही गुमाउनु पर्छ भने त्यो केवल आफ्नो रोग र रोगले उत्पन्न भएको मानसिक शोक।
बिरामी आफैंले आफ्नो रोगको बारेमा कथा, कविता, गीतवा चित्रको मध्यमबाट व्यक्त गर्ने हुनाले यसले प्रत्यक्ष रुपमा कार्य गर्छ। यसमा एउटा मात्र नभएर एकभन्दा बढी कलाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै: एउटा बिरामीलाई नृत्य र चित्र कोर्न पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण यो अहिले संसारभरि निक्कै रुचाइएको छ।
अमेरिकामा गरिएको एक खोज अनुसार रिस, तनाव, पश्चाताप, पिर इत्यादि जब चित्रको मध्यमबाट व्यक्त गरिन्छ। यति धेरै विशेषता हुँदाहुँदै पनि यससम्बन्धी खोज र कार्यहरु निक्कै कम भएका छन्, जसले गर्दा यो अझै ओझेलमै छ।
चित्रकलालाई लिएर गरिएका अरु खोजमा समेत यसले मानिसको व्यक्तित्वको बारेमा बुझ्न सकिने देखाएका छन्। उदाहरणको लागि कसैले रुखको चित्र कस्तो बनाउँछ। हरियो, पातले भरिपूर्ण मोटो रुखले सकारात्मक तथा जीवनप्रति आशावान र सक्रिया ऊर्जावान् व्यक्तित्व जनाउँछ भने त्यसको विपरीत कसैले नाङ्गो रुख, पातला हाँगाहरु बनाउँछ भने त्यसको अर्थ उदासिन, निस्क्रिय, निराशावादी व्यक्तित्व देखाउँछ।
१९७१ मा क्यान्सर रोगीमा यसको प्रयोग गरिएको थियो र प्रभाव आश्चर्यजनक पाइयो। जसमा रोगीको जीवनको गुनस्तर वृद्धि हुनुका साथै शारिरक तथा मानसिक तन्दुरुस्ती प्रदान गरेको पाइयो।
यसको प्रयोग सिपाहीहरुमा समेत गरिएको थियो। जसले उनीहरुमा युद्धको पीडा र डर बिर्साउनुका साथै सकारात्मकताको समेत विकास गरेको थियो।
नेपालमा समेत यसलाई महिला र बालबालिकामा मानव तस्करी, गरिबी, हत्या, हिंसा र रोगले निम्त्याएको मनोसामाजिक असर हटाउनको लागि प्रयोग गरिएको थियो। यसमा कलाका विभिन्न आयामको प्रयोग भएको थियो। जस्तै: नृत्य, चित्रकला, कथाबाचन, सडक नाटक, ध्यान, संगीत इत्यादि।
कला चिकित्साको मुख्य कार्य भनेको मष्तिस्कमा सन्तुलन ल्याउनु हो। कुनै पनि मानिसको भावनात्मक सम्बन्धमा आउने उतारढाव, गहिरो चोटपटक, मानसिक आघात आदिले मष्तिस्कको भावनात्मक केन्द्रलाई प्रभाव पार्छ। यो केन्द्रमा अत्यधिक असर पर्नाले शरीरमा स्ट्रेस हर्मोनको मात्रा बढी हुँदा क्रोनिक इन्फ्लामेसनको स्थिति आउँछ। यसबाट नसर्ने रोग उत्पन्न हुनुको साथै भइसकेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्छ। कला चिकित्साले मष्तिस्कका भावनाहरुलाई व्यवस्थित गरी खुसी हुन सिकाउँछ। जसबाट मानसिक शान्ति उत्पन्न भई मनोदैहिक रोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ।
रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्ने नदिने उपायका रुपमा यसलाई लिनुपर्छ।
मुख्यतया आर्ट थेरापीको प्रयोग सम्बेगात्मक रोगहरुमा, मनोरोग, क्यान्सर, एन्जाइटी, डिप्रेसन, बच्चाहरुमा हुने ढिलो विकास, आवश्यकताभन्दा बढी चञ्चलता, खाना नखाने, रिसाउने, एक्लोपना, दीर्घरोग, तनाव, मानसिक असुन्तलन इत्यादिमा भएको पाइन्छ। यो गर्न कलाकार नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, सामान्य मानिसलाई पनि गराउन सकिन्छ।
बिरामीलाई उसको रोगको बारेमा लेख्न वा चित्र कोर्न दिनुपर्छ। त्यसपछि त्यसको व्याखा गर्न लगाउनु पर्छ। उसले कस्तो रङको प्रयोग गर्छ त्यसको विश्लेषण गरी अवस्था थाहा पाइन्छ। उदारणको लागि कुनै बिरामीले कालो अथवा गाडा खैरो रङको प्रयोग गर्छ भने ऊ निराश छ भन्ने जनाउँछ।
यसरी भावनात्मक कारण पत्ता लगाई सोही अनुसार नै उपचारमा आवश्यक कलाका विधिहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ।
यो चिकित्सालाई अरु अवस्थाहरुमा समेत प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी निकै कम श्रोत र साधन लाग्ने कला चिकित्सालाई चिकित्साका अरु विधाहरुसँग समन्वय गरी रोगको रोकथाम तथा उपचारमा प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ।
-(लेखक आयुर्वेद चिकित्सक हुन् )
Previous articleदशैं खानपानबारे आयुर्वेद के भन्छ ?
Next articleके हो कुर्सीयोग? कसरी गर्ने? डा विनोद घिमिरे